6 ịmata banyere ajọ ifufe nke ga-eju gị anya. Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ ifufe bụ ihe ịtụnanya ihu igwe na-etolite n'oge ọnwa ọkọchị nke Northern Hemisphere. Hụrụ na onyogho nke satịlaịtị were, ha bụ ọmarịcha ihu, ọ bụ ezie na nke bụ eziokwu bụ nwere ike imebi nnukwu ihe.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ha, anyị ga-agwa gị 6 ịmata ihe banyere ajọ ifufe nke ahụ ga-eju gị anya.
1 1.- Ajọ Ifufe, Mayan chi
2 2. - Ajọ ifufe, ụzọ dị egwu nke mmiri
3 3.- Ajọ ifufe na ajọ ifufe, ha bụ otu?
4 4.- Anya nke ajọ ifufe, ebe dị jụụ
5 5.- Hurricane oge bu ...
6 6.- Ike dị egwu nke ifufe ifufe
1.- Ajọ Ifufe, Mayan chi
You nwetụla mgbe ị na-eche ebe aha "hurricane" si? Ndị Mayan chepụtara ya. Maka ha, bụ chi nke na-achị ifufe, ọkụ na oke ifufe.
2. - Ajọ ifufe, ụzọ dị egwu nke mmiri
Ihe omume ndị a nwere ike ịdaba Lita lili 9 XNUMX kwa ubochiN'ihi ya, ọ dị oke mkpa, ịnọrọ n'ebe dị anya ka ị nwere ike, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike, nọrọ n'ime ụlọ ọ bụrụhaala na ọ dị mma.
3.- Ajọ ifufe na ajọ ifufe, ha bụ otu?
Ha bụ. Na America na Europe anyị maara ha dị ka ajọ ifufe, mana na ọdịda anyanwụ Pacific a na-akpọ ha ajọ ifufe. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọkarị ha naanị ebe okpomọkụSite n'ụzọ, nke ahụ bụ ihe a na-akpọ ha na Indian Ocean.
4.- Anya nke ajọ ifufe, ebe dị jụụ
Etiti ma ọ bụ anya nke ajọ ifufe ahụ bụ akụkụ dị jụụ. Yabụ, ọbụlagodi mgbe ị chere na ihe niile emeela, na eziokwu ọ bụghị otú ahụ. Akụkụ a nwere ike iru 32km, yabụ ị kwesịrị inwe ndidi.
5.- Hurricane oge bu ...
Ka ajọ ifufe mepụta, ọ dị mkpa na oke osimiri dị ọkụ, ma ọ dịkarịa ala okpomọkụ nke 20ºC. Ka ọ were, Oge ajọ ifufe malitere na June wee kwụsị na November.
6.- Ike dị egwu nke ifufe ifufe
Ifufe sitere n'oké ifufe nwere ike ịfe karịa 250km / h, Na-ebute ebili mmiri nke elu karịa mita 5,5.
You mara ụfọdụ n'ime ihe ndị a ịmata banyere ajọ ifufe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » 6 ịmata ihe banyere ajọ ifufe nke ga-eju gị anya
Ụtụtụ ọma. Dịka onye ọrụ nke Merchant Marine na ụfọdụ ndị na-akwọ ụgbọ mmiri agafeela m, ọkachasị Pacific, Oké Osimiri China na oké ifufe dị na North Atlantic. Ekele obi ekele.? ?
Zaghachi Jorge Juan Madroñal Fernández
Ekele Jorge, daalụ maka okwu gị 🙂
6 egwuregwu vidio megide mgbanwe ihu igwe